250W 500W Kpm tsy manana orinasa IP65 DMX RGB na fitoeran'ny lanjan'ny fiara mpitatitra LWW-10,Led Mozika Washer,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - Shina 250W 500W Kpm tsy manana orinasa IP65 DMX RGB na fitoeran'ny lanjan'ny fiara mpitatitra LWW-10, Manufacturer & Supplier
250W 500W Kpm tsy manana orinasa IP65 DMX RGB na fitoeran'ny lanjan'ny fiara mpitatitra LWW-10. LED WALL WASHER LIGHT. Ny andiam-baovao mahavariana ao amin'ny Festive Lights misy fiantraikany marina dia ny andian-tsarin'ny LED Wall Washer, izay mamorona hatsaram-panahy mendrika, manome fahazavana ara-pahamarinana. Azo ampiasaina amin'ny sehatra midadasika kokoa koa izy io, indrindra raha maro no nampiasaina na nanangona faritra midadasika misy fiantraikany mahery vaika. Ny rindrin-jiro LED no tena ampiasaina amin'ny fananganana sy fanasongadinana trano na zaridaina. Ny seranan-tsika dia ahitana ny loko miovaova loko mamorona loko maro, toy ny mipoitra, maneno na static.It dia afaka miasa amin'ny fomba mahaleo tena sy DMX, izay afaka mamokatra ny fiovan'ny loko isan-karazany, toy ny manjelanjelatra, mipoitra, mandaitra, loko fito mifanaraka amin'ny synchronous etc . DMX 256 kilasy ambony dimmer, DMX programmable (an'arivony maro no azo ampiasaina raha maro ny jiro mifamatotra). Fomba fanaraha-maso ny jiro: Mpiasa tsy miankina / Master / Slave / DMX / RGB na Steady( 250W 500W Kpm tsy manana orinasa IP65 DMX RGB na fitoeran'ny lanjan'ny fiara mpitatitra LWW-10 )
250W 500W Kpm tsy manana orinasa IP65 DMX RGB na fitoeran'ny lanjan'ny fiara mpitatitra LWW-10
©2005-2018 Karnar Mifandraisa aminay Site map Last modified: July 24 2019 04:13:06.